सबै बिगारेको आईजीपीले हो ? : खनाल - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
सबै बिगारेको आईजीपीले हो ? : खनाल
- प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सबै घटनामा आफूलाई दोषारोपण गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा सबैबाट आशा गरिएका व्यक्तिले काम गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्नमा खनालले सबै बिगारेको आईजीपीले हो ? भन्दै प्रति प्रश्न गर्नुभयो ।
जनताले आफूबाट अपेक्षा गर्नु राम्रो भएको भन्दै आईजीपी खनालले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले प्रहरी संगठनभित्र गैरव्यवसायिक चरित्रकालाई कारबाही र आन्तरिक शुद्धिकरणसमेत गरेको बताउनुभयो । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा केही कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गरिसकेको बताउदै आईजीपी खनालले अहिले पनि काम भइरहेको र चाँडै परिणाम आउने दावी गर्नुभयो ।
प्रहरी संगठनप्रतिको नकरात्मक धारणालाई शून्यमा झार्ने दावी समेत उहाँको छ । यस्तै, अहिले नयाँ नयाँ प्रविधि र शैलीबाट अपराध हुन थालेको भन्दै आईजीपी खनालले त्यसको अनुसन्धानका लागि स्रोतसाधान प्रर्याप्त नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
विवाद मिलाउँदै दुई अध्यक्षश्रावण ६, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुङ्गो लगायो श्रावण ५, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
असारमा मात्रै झण्डै १९ अर्ब ६२ करोड रकमान्तर श्रावण ५, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
प्रहरी र गाँजा तस्करबीच गोली हानाहानश्रावण ५, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
कांग्रेसले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण गर्नेश्रावण ५, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
मेची राजमार्गको ढुंगामाटो पन्छाएपछि एकसय गाडी वारपार
मेची राजमार्गको ढुंगामाटो पन्छाएपछि एकसय गाडी वारपार श्रावण ५, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
तमोरमा बगेर २ युवक बेपत्ताश्रावण ५, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
चन्द नेतृत्वको नेकपाका काठमाण्डौ उपत्यका इञ्चार्ज माइला लामा पक्राउश्रावण ५, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
बालबालिकाहरु हिंसा र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममाश्रावण ४, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्
सिद्धार्थ राजमार्ग पुनः भासियोश्रावण ४, २०७६ पूरा पढ्नुहोस्